Isitolo esidayisa yonke impahla ngefoni enezintambo ezingama-41 ze-iphone Manufacturer and Supplier | BWOO
I-BWOO Earphone Enentambo ye-iPhone
• I-earphone ye-bluetooth esezindlebeni enezinto zensimbi zethusi.
• Isixhumi sombani weselula ye-apula.
• Inkinobho yevolumu ukulawula ivolumu phezulu naphansi.
• I-earphone ephezulu yesitiriyo enemakrofoni.
• I-chip yangempela ngaphandle kokuxhumeka kwe-bluetooth.
• Idizayini ye-Ergonomic yokugqoka ngokunethezeka.
I-Earphone Enentambo ye-iPhone
I-BO-HF10OR i-earphone enezintambo ye-iPhone, i-earphone ye-Bluetooth elawulwa ngocingo e-2-in-1 ngaphandle kokuxhuma kwe-bluetooth, ama-earphone e-stereo anombhobho, wamukele ngokufudumele uphenyo lwakho.
Usebenzisa i-apple original chip ne-MFI iyatholakala, xhuma iselula kalula ngaphandle kokuzivelela.
Intambo yethusi engu-1.2m enesixhumi sombani weselula ye-apula, isitiriyo sombani esinekhwalithi yomsindo omuhle kakhulu.
Idizayini ye-Ergonomic yokugqoka ngokunethezeka, lalela noma yini oyifunayo futhi uyisebenzise noma ikuphi.
Imvamisa Impendulo 20Hz-20kHz
Isibonelo No. IBHODI-HF10OR
Into I-Earphone Enentambo ye-iPhone
Ubuningi / ibhokisi 300pcs Usayizi weCarton 60x39x45cm
GW / ibhokisi 15kgs Iphakheji Ibhokisi lesipho
I-A1: Yebo, Singabantu abakhiqizi abangochwepheshe.
Ungayisebenzisa kanjani ihedsethi enentambo ye-Apple?
Iselula yakwa-Apple iza nehedsethi enentambo enemakrofoni, izinkinobho zevolumu, nenkinobho emaphakathi. Inkinobho yamahedisethi ikuvumela ukuthi uphendule kalula izingcingo, izingcingo zokuqeda, futhi ulawule ukudlala okulalelwayo nevidiyo. Yize ihedsethi enentambo ilula ekwakhiweni, isebenziseka kakhulu!
Xhuma ihedsethi ukuze ulalele umculo noma uphendule izingcingo, futhi ofonayo uzolizwa izwi lakho ngombhobho owakhelwe ngaphakathi. Cindezela inkinobho yesikhungo ukulawula ukudlala komculo nokuphendula noma ukuvala izingcingo, noma ngabe ifoni ephathekayo ikhiyiwe.
Lokhu okulandelayo ezinye zezindlela zokusebenzisa i-earphone enentambo ye-iPhone:
[Uma ulalele Umculo]
• Misa isikhashana ingoma noma ividiyo: cindezela inkinobho yesikhungo kanye bese uyicindezela futhi ukuqala ukudlala futhi.
• Yeqela engomeni yesidleke: cindezela ngokushesha inkinobho yesikhungo kabili.
• Buyela engomeni edlule: cindezela inkinobho yesikhungo ngokushesha kathathu.
• Ukusheshisa phambili: Cindezela inkinobho yesikhungo kabili ngokushesha bese uyibamba.
• Buyisela emuva: Cindezela ngokushesha inkinobho yesikhungo izikhathi ezintathu bese uyibamba.
• Lungisa ivolumu: Cindezela inkinobho "+" noma "-".
[Uma uthola ucingo]
• Phendula ucingo olungenayo: Cindezela inkinobho yesikhungo kanye.
• Vala ucingo lwamanje: Cindezela inkinobho yesikhungo kanye.
• Yenqaba ucingo: Cindezela bese ubamba inkinobho yesikhungo cishe imizuzwana emibili, bese uyidedela. Ama-beeps amabili aphansi azoqinisekisa ukuthi ucingo lunqatshiwe.
• Shintsha izingcingo ezingenayo noma ezigcinwe bese ugcina ucingo lwamanje: Cindezela inkinobho yesikhungo kanye. Cindezela futhi ukubuyela emuva ocingweni lokuqala.
[Uma uthatha izithombe]
Yini okufanele uyenze uma ungenayo induku yeselfie lapho ufuna ukuthatha i-selfie? beka ifoni yakho endaweni, shintshela kusixhumi esibonakalayo sekhamera, bese usebenzisa ukhiye wevolumu yamahedsethi ukulawula isithombe ukude.
Langaphambilini Ishaja yemoto ye-USB C
Olandelayo: I-earbud enentambo ye-HF20 enemakrofoni